အဆိုတော် ဟန်ထူးလွင် (ကျားပေါက်) က သူ့ရဲ့ ဗရုသုက္ခဗေဒ Episode3ဖြစ်တဲ့ Me and My… – PVTV Myanmar
အဆိုတော် ဟန်ထူးလွင် (ကျားပေါက်) က သူ့ရဲ့ ဗရုသုက္ခဗေဒ Episode3ဖြစ်တဲ့ Me and My Religion Part II (A) ကို သူကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်နေတဲ့ 92.00MAMA မှာ ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ထားတာကို PVTV က ထပ်ဆင့်မျှဝေထုတ်လွှင့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Me and My Religion Part I ကိုလည်း အောက်ပါ လင့်ခ်မှာ သွားရောက် နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
Like – 13K Share – 1409
ဆောင်းဦးလှိုင် ဗီဒီယိုတွေလည်းတင်ပေးပါ 🤪
Tayza Yarzar Lin says:
2021-06-11 at 7:27 PM
Respect ဆရာကျား…တွေးတာချင်းတူတယ်ဗျာ…………ဖားအောက်ဆရာတော် ကြီး… ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး ရဲ့တရားတွေ နားထောင်ကြည့် ကြပါ…ဗုဒ္ဓ တကယ်သိစေချင်တာတွေ ကို လက်ဆင့်ကမ်း ပြောပြနေသလိုပဲ….
Ko Du Gyi says:
2021-06-11 at 7:28 PM
နောက် ကြုံရင် ကိုကျားပေါက်နဲ့ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးချင်ပါသေးတယ်။
2021-06-11 at 7:50 PM
သားကို လုံးဝ မနှစ်သက်ခဲ့ ဘူးဘူး
သိပ္ပံ သင်္ချာ ရှုထောင့်က ကြည့်မြင်တာ
Buddhism က သည့်ထက် တိကျပါတယ်
2021-06-11 at 8:10 PM
ကိုကျားအများကြီး ​လေ့လာထားတာဘဲ ​လေးစားပါတယ်။အဆုံးထိနား​ထောင်လိုက်​တော့ အ​ဖြေ​တွေ့ပါတယ်။ကိုကျား​ပြောသလိုဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနှစ်သာရကလည်း စဥ်းစားတတ်တဲ့ ဥာဏ်ရဲ့ အလုပ်ပါ။ထိုင်ပီးစဥ်းစားတာ အိပ်ပီးစဥ်းစားတာနဲ့ သတိပဌာန် သမာဓိထူ​ထောင်ပီးစဥ်းစားတာ ကွာတာ။တကယ့် ဆရာ​တော်ကြီး​တွေကြ​တော့ ​ကောင်းတာလုပ်ရင် ​ကောင်းကျိုး​ပေးမယ်၊​အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင် ဒီလို​ဟောကြပါတယ်။ကိုကျား​ပြောသလိုဘဲ အကျိုးမ​ပေးဘဲပျက်သွားတာလဲရှိပါတယ် ပြုလုပ်လိုက်ချိန်မှာ စိတ်​စေတနာ​ဇော ​ပေါ်မူတည်ပီး​တော့
2021-06-11 at 9:02 PM
Good job 👌👍 အော် ဒါနဲ့ ကမကလ မအလ နဲ့ အမဲ့လုံးကမမြင်ဘူးကျဘူးဗျာ သူတို့ရှိရောက်အောင်ပိုလိုရရင်အရမ်းကောင်မယ် ဗျာ 👌🤣🤣🤣
Khin Khin Htwe says:
2021-06-11 at 9:03 PM
အထင်နဲ့အမြင်လွဲသွားပြီလို့ပြောပါရစေ။သားဖေဖေထက် အန်တီကအသက်ကြီးပါတယ်။သီချင်းအေးလေးတွေကလွဲရင်မကြိုက်ခဲ့ဘူး။ရန်ကုန်မြို့ကြီးအရင်အတိုင်းဘဲတို့၊ဗျောက်ကြီးနဲ့အထိလည်းနားထောင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ် part2ထိနားထောင်မိချိန်မှာတော့ ချီးကျူးမိပါတယ်။လူငယ်တွေလေ့လာပြီဆိုရင် လူကြီးတွေထက် အနုစိတ်တာတွေ့ရတယ် ။ရေဆုံးမြေဆုံးထိလိုက်တာတွေ့ရတယ်။လေးစားပါတယ်။ဝမ်းလည်းသာတယ်။ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကိုထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာတဲ့အတွက်ပါ။
May Phoo Lwin says:
2021-06-11 at 9:43 PM
2021-06-11 at 9:48 PM
စတုရန်းကွက် ထက်ဘာသာတရားကကျယ်ပြန်ပါတယ် တစ်ရားတော်တွေကို နားလည်ဖို့ နှစ်ကာလကြာရှည်
တစ်ခုတော့ရှိတယ် ဘာသာတရားက modern ကဗျာတစ်ပုဒ်မဟုတ်ဘူးဗျ
2021-06-11 at 9:50 PM
2021-06-11 at 9:53 PM
တကယ်ကိုအာရုံစိုက်နားထောင်မိတယ် မျက်စိထဲမှာ Equation တွေ Formula တွေ Result တွေမြင်ယောင်လာတယ် ဗုဒ္ဓအယူအဆမပါတဲ့ သိပ္ပံပညာဟာ အကန်းနဲ့တူပြီး သိပ္ပံပညာမပါတဲ့ ဗုဒ္ဓတရားတော်ကလည်း အကန်းနဲ့တူတယ်လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။ ခု ကိုဟန်ထူးလွင်ရှင်းပြတာက ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေက သိပ္ပံနည်းပညာရဲ့ ကိုင်းပွား သင်္ချာ ဘာသာရပ်နဲ့ရှင်းပြတာ တန်ဖိုးရှိပါတယ်
ランら ラブ らし says:
2021-06-11 at 10:33 PM
အဘိဓမ္မာ လူတိုင်း သင် ယူ လေ့ လာ ပြီး ကျင့်ကြံ ရင် ဘာ တရား ဉပဒေ မှ မလို ဘူး ✍️✍️✍️
Cree Go says:
2021-06-11 at 10:47 PM
လာမယ့္ အပိုင္း ေတြလဲ ေမ်ာ္ေနမယ္
Michael Waiyan says:
2021-06-12 at 6:19 AM
episode2linkလေးပေးကြပါလားဗျ
Grenade Cha says:
2021-06-12 at 6:29 AM
ဒါကြောင့် ကို ကျားက ထူးတယ်လို့ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြတာ
ကိစ္စ တခုကို Philosophically အရ ရော Logistically အရ ရော ရှုမြင်တာ😎🤔
Nilarlynn Htun says:
2021-06-12 at 8:57 AM
​လေးစားပါတယ် လူငယ်​တွေရဲ့Idolက ဒီလို​တွေးနိုင်​​​အောင်လမ်းပြ​ပေးတာ​​​ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
စာ မျက် လုံး says:
2021-06-12 at 9:28 AM
Respect thinking and idea.
Poe Ei Htet says:
Very good ပါပဲ ကိုကျားပေါက် အဘိဓမ္မာကို လူငယ်တွေ စိတ်ဝင်တစားနားထောင်ဖြစ်အောင်ကို ပြောသွားနိုင်တာ Great job! 👏👏👏
ပထမပိုင်း နားထောင်မိထဲက သားကျား,ထူးခြားနေတယ် ခု ဒုတိယပိုင်း နားထောင်ပြီး ထောက်ပြတာတွေ ကြိုက်လာတယ် ဆက်နားထောင်အားပေးနေမယ်နော် 5tin pr.
Thet Meddy says:
2021-06-12 at 2:47 PM
အခုခ်ိန္မွာ မနက္လင္းထဲက ေဒါသျဖစ္စရာ သတင္းေတြ နဲ့တေန ့လံုး ေနထိုင္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ အေတာ့ကို တန္ဖိုးရွိပါတယ္
အေတြးအေခၚအရမ္းျမင့္တဲ့အတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့အပိုင္းေတြကို ျပန္နားေထာင္လိုက္ပါ့မယ္
ကိုဟန္ထူးလြင္ သက္ရွည္ က်န္းမာ ခ်မ္းသာ ေဘးခပ္သိမ္းကင္းေဝးပါေစ ေမာင္ေလး🙏
Shu Ma Wa says:
2021-06-12 at 4:55 PM
thank you PVTV and Han Htoo Lwin
2021-06-13 at 11:09 AM
Monica Hesa says:
2021-06-13 at 11:22 AM
ဒုတိယပိုင်း နားထောင်ပြီးမှ ပထမပိုင်း လာနားထောင်တဲ့သူရှိလား
အမွန္တရား ခ်စ္သူ says:
2021-06-13 at 3:58 PM
သူ႔ဘာသာနဲ႔သူ perfect ျဖစ္​ၿပီးသား ဥပမာ​ေတြနဲ႔​ေရာ​ေထြး​ေအာင္​မလုပ္​ရဘူး
၁။ဘာသာႀကီး ​ေလးခု( ဗုဒၶ၊ခရစ္​ယာန္​၊အစၥလန္​၊ဟိႏၵူ)ထဲကတစ္​ခုခု သို႔မဟုတ္​
၂။အျခားကိုးကြယ္​ရာတစ္​ခုခု(နတ္​၊မီး၊​ေရ၊​ေလ စသည္​) သို႔မဟုတ္​
၃။ဘာသာမဲ့(ဘာမွမကိုးကြယ္​၊မိမိကိုကိုယ္​ကိုးကြယ္​ စသည္​) တစ္​ခုခု​ေတာ့ ျဖစ္​ၾကရမယ္​
အဓိကက ကို​ေ႐ြးခ်ယ္​တဲ့အရာကို ကိုအ​ေကာင္​းဆံုးအဆံုးထိလုပ္​ဖို႔ပဲလိုအပ္​ပါတယ္​ အားလံုးကိုရႈပ္​​ေထြး​ေအာင္​​ေလ့လာၿပီးအခ်ိန္​​ေတြကိုအလဟႆအကုန္​မခံၾကပါနဲ႔ လူတိုင္​းက Perfect မျဖစ္​ဘူး ဥပမာ ​Biotechnology ​ေက်ာင္​းသားတစ္​​ေယာက္​ဟာ ဘာသာခြဲ(medical,industrial,environmental,plant,animal)တစ္​ခုခုကိုပဲ specialized လုပ္​ၿပီး လုပ္​မွ ​ေအာင္​ျမင္​နိုင္​ပါတယ္​ ဘာသာ​ရပ္​တိုင္​းဟာက်ယ္​ျပန္​႔ၿပီးအဆံုးမရွိတဲ့အတြက္​​ေၾကာင္​့ အားလံုးကိုတစ္​ၿပိဳင္​တည္​း အခ်ိန္​ယူၿပီးထူး​ခ်ြန္​​ေအာင္​မ​ေလ့လာန္ိုင္​ပါဘူး အခ်ိန္​ကုန္​မခံၾကပါနဲ႔ တစ္​ခုခုကိုပဲထူးခ်ြန္​​ေအာင္​လုပ္​ရမွာပါ ဘဝသက္​တမ္​းဟာတို​ေတာင္​းလြန္​းပါတယ္​
Tin Win Myint says:
2021-06-13 at 4:06 PM
2021-06-13 at 4:12 PM
မင္​းဟာဆရာဝန္​လုပ္​မွာလား အဂၤ်င္​နီယာလုပ္​မွာလား ​ေရွ႕​ေနလုပ္​မွာလား မင္​းရဲ႕​ေ႐ြးခ်ယ္​မႈဟာ မင္​းရဲ႕အလုပ္​ပါ အားလံုးကို​ေလ့လာၿပီးအ​ေကာင္​းဆံုးကိုလုပ္​မယ္​ဆိုရင္​​ေတာ့ ဘယ္​ဟာကအ​ေကာင္​းဆံုးလည္​းဆိုတာမ​ေသခ်ာပါဘူး အားလံုးကိုအခ်ိန္​​ေပး​ေလ့လာၿပီးမွ ကိုယ္​့ဘဝ​ေနာက္​ဆံုးက်န္​တဲ့အခ်ိန္​မွာတစ္​ခုခုကို​ေ႐ြးခ်ယ္​လိုက္​ရၿပီး အဲတစ္​ခုအတြက္​ ျပည္​့စံု​ေအာင္​လုပ္​ဖို႔အခ်ိန္​မက်န္​​ေတာ့ရင္​ ​ေနာင္​တရပါလိမ္​့မယ္​ အဓိကကိုယ္​့​ေ႐ြးခ်ယ္​မႈပါပဲ အဲဒီ​ေ႐ြးခ်ယ္​မႈကို ဇြဲ၊လံု႔လ၊ဝီရိယထားၿပီးလုပ္​ရင္​ ၿပီး​ေျမာက္​တယ္​ဆိုတာလူသားတိုင္​းနားလည္​ထားၿပီးသားပါ အမ်ားႀကီးစဥ္​းစားၿပီးအခ်ိန္​ကုန္​မခံသင္​့ပါဘူး Idea တစ္​ခုအ​ေနနဲ႔ သူတစ္​ပါးရဲ႕အ​ေတြာအႀကံဳကို ဝင္​​ေရာက္​ရွာ​ေဖြဖို႔ဆိုရင္​​ေတာ့မဆိုးပါဘူး Finally မင္​းဟာတစ္​ခုခုကိုပဲ​ေ႐ြးခ်ယ္​ရမွာပါ
Lwin Tun says:
2021-06-14 at 8:08 AM
Tin Mya says:
2021-06-14 at 8:27 AM
နာမည်တခု ရတယ် ဆိုတာ ‌ကိုယ့် အတွေး အခေါ် ကို ချ ပြရဲလို့ပါ … လွတ်လပ်တဲ့ အတွေး ပိုင်ရှင်ပါ .. ခုချိန်က စပြီး သတိနဲ့ ပြောဆို ဆက်ဆံ ကြပါ .. ဖားယားပြိး မိတ်ဆွေဖွဲ့ထားရင် တကယ် အကူအညိ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး မီးလောင်ပြင်ကို လာဝယ်တဲ့ သူငယ်ချင်းရဖို့ စိတ်ကောင်း နှလုံးကောင်းနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့ဖို့ လိုပါတယ် .. ကံ ဆိုတဲ့ အလုပ်ဆိုတာ အဲဒါ ပါပဲ ကောင်းမွန်သော စိတ်နှလုံးနဲ့ လုပ်ကိုင် ဆက်ဆံ ခဲ့ခြင်းရဲ့ အကျိုးပါဘဲ
Khant Zin Moe says:
2021-06-14 at 10:04 AM
မှတ်သားစရာ ဗဟုသုတတွေ အများကြီးရလိုက်ပါတယ် လေးစားပါတယ် ဆရာကျား မိမိသိတဲ့သဘောတရားတွေကို ပြန်ပြီး ‌sharing လုပ်ပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ
2021-06-14 at 11:56 AM
သားပြောဒါတွေထဲမှာအမှားမပါပေမဲ့တခုကျန်နေဒါကစေတနာ သူဘာလုပ်လုပ်ပေးဝေသူရဲ့စေတနာကအကျိုးအာနိသင်ထက်ရင်ထက်သလို တူညီစွာပြန်လာဒါလေးက ကံ ကံရဲ့အကျိုးပါ
Saw Kyawaung says:
ကာယကံ ဝစီကံ မနော်ကံ
ပြုလုပ်နေကြတယ် ဘယ်လိုအလုပ်(or)ကံပဲလုပ်လုပ် ကံသုံးပါးစလုံးနဲ့ပြုလုပ်ရင် အကျိုးပေးတဲ့သတ္တိကအားကောင်းတယ် အထမြှောက်တယ်ပြောရမှာပေါ့ ကုသိုလ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် အကုသိုလ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ
ကံသုံးပါး ရှိတဲ့အထဲ တစ်ပါးပါးအားနည်းနေရင် ကံသတ္တိတွေအားနည်းနေတဲ့အတွက်အကျိုးပေးလည်းအားနည်းနေတာပဲ
အတိတ်ကံတွေ ဘယ်လိုအကျိိုးပေးသလဲဆိုတော့ ကျနော်ဉာဏ်မှီသလောက်ပြောရရင် ကောင်းကံ မကောင်းကံ ဆိုတဲ့ အတိတ်က ကံရဲ့သတ္တိတွေက အခုခောတ်လိုပြောရရင်
ဒုံးပျံ တွေလိုပါပဲ ကျနော်တို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာ ဝဲနေသလိုလိုက်နေကြတယ်
ကြီးတာရောသေးတာရောပေါ့ဗျာsizeစုံပေါ့ အဲ့ဒီဒုံးပျံနဲ့တူတဲ့ ကံတွေ ဘယ်အချိန်ပစ်ချသလဲဆိုတော့
အခုလက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန် ကံသုံးပါး ရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ပစ်လို့
ရုပ်နာမ် တရားတွေ မချုပ်မငြိမ်းမခြင်း
Mar Lar T A says:
2021-06-14 at 3:25 PM
Zayer Saisai says:
2021-06-14 at 8:39 PM
လ၊မှန်းမသိ ဠ မှန်းမသိတဲ့ မင်းတို့ စကစ
2021-06-15 at 8:16 AM
Harry Pyae says:
2021-06-15 at 11:54 AM
Aung Ko Lin says:
2021-06-15 at 7:54 PM
2021-06-17 at 9:24 AM
2021-06-17 at 10:56 AM
Cherry Myint says:
ဆရာကျားကတော့ ဆရာကျားပါပဲ 🤙
Naing Lynn says:
2021-06-19 at 8:11 PM
၃၁ ဘံု ကို ေလ့လာဦး
Cho Kyi Kay says:
2021-07-10 at 4:27 PM
2021-08-24 at 2:24 AM
ကိုကျားကိုတကယ်ချစ်ရင် တကယ့်idolလို့သတ်မှတ်ရင် ပေါက်လွှတ်ပဲစားpageတွေ channelတွေက ကြည့်မယ့်အစား နားထောင်မယ့်အစား သူ့ရဲ့official podcast channelမှာ သွားပြီး အားပေးပါ။ ဟိုမအေလိုးpageတွေ YouTube channelတွေကလဲ ethicရှိပါ ကိုယ်မေကိုယ်လိုးတွေရေ 🙂
2021-08-25 at 9:01 PM
2021-08-25 at 9:06 PM